Martha Karua oo lagu boorriyay in ay ku biirto xisbiga Jubilee – The Voice of Northeastern Kenya
Martha Karua oo lagu boorriyay in ay ku biirto xisbiga Jubilee
Star FM November 30, 2016
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa shalay baaq u jeediyay hogaamiyaha xisbiga Nark Kenya, haweeneyda lagu magacaabo Martha Karua, taasoo uu ka codsaday in ay ku biirto xisbigiisa talada haya ee Jubilee.
Kenyatta ayaa sheegay in haddii Mrs Karua ay Jubilee raacdo ay fududaaneyso in ay guul ka gaarto mowqifkeeda siyaasadeed iyo midka ay ku damacsantahay in ay ugu adeegto dadka Kenyanka ah.
Isagoo ka hadlayay isu soo baxa ka dhacay deegaanka Kerugoya ee ismaamulka Kirinyaga ayuu madaxweynuhu Karua ku boorriyay in ay ka mid noqoto xisbiga Jubilee si ay dadka reer Kirinyaga u yeeshaan 1 cod oo mideysan.
Siyaasiyadda ayaa ku sugneyd goobta uu madaxweynaha kula hadlayay shacab fara badan xili uu shalay soo gaba gabeynayay booqasho uu ku joogay gobolka bartamaha dalka.
Karua ayaa u hanqal taageysa in ay sanadka soo socda ee 2017-ka xiliga doorashada guud u tartanto xilka madaxa maamul goboleedka Kirinyaga iyadoo la loollami doonta siyaasiyiin ay ka mid tahay wasiiraddii hore ee dowlad wadaagga Anne Waiguru.
Haweeneydaan hogaamisa xisbiga mucaaradka ah ee Narc Kenya ayaa lagu xasuustaa in ay doorashadii dhacday bishii March ee sanadkii 2013-ki u tartameysay xilka ugu sarreeya dalka ee madaxweynaha, in kastoo ay ku guul dareysatay.
← Raila Odinga oo ka jawaabay eedeymo uga yimid dhinaca madaxweynaha
Ciidamo ka tirsan Milatariga India oo lagu dilay weerar →